Sideed Ku Cabirtaa Suuqgeynta Mawduuca? | Martech Zone
Sideed Ku Cabirtaa Suuqgeynta Mawduuca?
Arbaco, Juun 24, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Kani waa sawir qurux badan oo ka socda Brandpoint oo ku saabsan Cabbirka Guusha Suuqgeynta Mawduuca. Ma aha qayb kasta oo ka mid ah waxyaabaha ku socda inay iibinayaan, laakiin xawaaraha iyo ururinta waxyaabaha ayaa hubaal wada wacyiga iyo tixgelinta, aakhirka u horseedaya isbeddelka.
Xeeladaha suuq-geynta waxyaabaha sida qoraallada maqaalka, maqaallada muuqaalka leh, nuqulka websaydhka la hagaajiyay, waraaqaha cad, waxyaabaha ku jira warbaahinta bulshada iyo war-saxaafadeedyada ayaa macaamiisha u raacaya waddo gaar ah. Suuqgeyntu waxay soo saartaa wacyigalin ku saabsan astaantaada, sheygaaga ama adeeggaaga; wuxuu ku dhiirrigeliyaa macaamiisha inay ku mashquuliyaan oo ay tixgeliyaan waxay u badashaa hogaamin iyo iib; abuurana u doodayaal.
Tags: wacyigatixgelintaContent Suuqdiinta
Jul 25, 2013 markay ahayd 12:00 AM
Waad ku mahadsan tahay tan. Waxaan hadda ku cabirnaa suuqgeynta maaddada iyada oo loo marayo Google Analytics iyo isdhexgalka GNIP.